Toeram-pizahantany - Vaovao momba ny dia | Vaovao momba ny dia (Pejy 2)
Pula any Kroasia
Pula any Kroasia dia nanjary toerana fitsangantsanganana manan-danja noho ny lova romanina sy medieval ary ny morontsiraky ny morontsirak'i Adriatika.
Grindelwald, any Suisse
Soisa dia firenena karatra paositra. Tendrombohitra tsara tarehy, tanàna mahafinaritra, tanàna madio, olom-pirenena nahita fianarana, fitaovana fitaterana tsara… Eny…
Playa de Aro dia miorina eo afovoan'i Costa Brava ary miavaka noho ireo lava-bolany tsara tarehy, ny velaran-tany mahavariana ary ny sakafo matsiro ao aminy.
Sarotra ho an'ny rehetra ireo fotoana ireo. Ara-bakiteny. Mbola eo ihany isika, nefa tsy afaka mivezivezy intsony fa mivoaka ny ...
Ny valan-javaboary fialamboly dia toerana fitsangantsanganana mahafinaritra miaraka amin'ny ankizy fa tsy ankizy loatra. Betsaka ny olon-dehibe mankafy ...
Mendrika hotsidihina ny tanànan'ny Almería. Ao amin'izy ireo dia hahita tantara sy tsangambato ianao, hatsaran-tarehy voajanahary ary gastronomia mahafinaritra.
Làlan'ny tranoben'i Frantsa
Ny lalan'ny lapan'i Frantsa dia mamakivaky ny lohasahan'i Loire, ahitana trano mahatalanjona am-polony maro ary tranokala iray lova manerantany.
Pau, tantaram-piainana akaikin'ny Pyrenees
Pau, any Frantsa, dia tanàn-dehibe feno tantara sy lova be volo, nefa koa manana endrika mahafinaritra sy gastronomie tsara.
Fitsidihana ny Grand Canyon any Colorado
Ny kolontsaina amerikana dia niara-nifindra tamin'izao tontolo izao niaraka tamin'ny indostrian'ny kolontsaina matanjaka. Tsy misy fisalasalana,…
10 ny tanàna espaniola mandresy ny Instagram. Te hahafantatra ve ianao hoe iza no resahinay? Azo antoka fa hahagaga anao izy ireo!
Inona no hatao any Barcelona? torolàlana fototra amin'ny fitsidihanao an'i Barcelona
Torolàlana fototra momba an'i Barcelona izay misy ny zavatra rehetra hitanao sy ataonao ao Barcelona, ​​ary koa ny lovia tokony hozahanao.
Ny tanànan'i Nazaré Portiogey dia iray amin'ireo tsara tarehy indrindra amin'ny firenena mifanila aminy. Azavainay izay azonao atao sy izay tsy maintsy jerenao ao amin'io tanàna Portiogey mahafinaritra io
Misy tandavan-tendrombohitra midadasika mamakivaky ny faritra eran'i Eropa: ny Alpes. Be voninahitra ny tendrombohitra misy azy ary maro amin'izy ireo ...
Manana planina voajanahary tsara tarehy ny planetantsika, antenaina fa hotehirizina rehefa mandeha ny fotoana. Miankina amintsika izany ka mila ...
Ezcaray dia tanàna iray any La Rioja, vondrom-bahoakan'ny fahaleovan-tena Espaniola, tany iray ampitan'ny renirano fito izay ...
Mogarraz, toerana any Salamanca
Mijanona ao Espana izahay anio mahalala ny iray amin'ireo tanàna tsara tarehy maro ao: Mogarraz. Kely izy io, toy ny miafina ao anaty ...
Ruta del Cares, ny malaza indrindra any avaratr'i Espana
Misy olona tia any ivelany, mankafy ny masoandro sy ny natiora, ary deraiko mafy izy ireo. Atsinanana…
Herinandro ao Corsica
Manana nosy maro ny Ranomasina Mediterane saingy telo fotsiny no lehibe ary anisan'izany i Corsica, paradisa voajanahary ...
Ulaanbaatar, renivohitra maloto indrindra manerantany
I Mongolia dia firenena aziatika mitazona lavitra izay nandritra ny Ady mangatsiaka teo ambanin'ny orbitan'ny ...
Ho avy ny fahavaratra ary efa mieritreritra ny toeram-pialan-tsasatra izahay. Tianay ve ny ranomasina, milentika masoandro ...
Rahoviana no tsara kokoa ny mankany Mallorca? Raha tsy azonao antoka hoe inona ny fotoana atolotra anao indrindra dia mankanesa ao ary jereo ireo torohevitra nomenay anao mba hanana dia tsy hay hadinoina.
50 kilometatra monja miala an'i Madrid, eo afovoan'ny Sierra de Guadarrama tsara tarehy eo amoron-kavoana ...
Ny tempolin'i Debod any Madrid
Ny iray amin'ireo harena sarobidy eto an-drenivohitra dia ao amin'ny Parque de la Montaña de Madrid ...
Ilay tendrombohitra avo indrindra any Eropa
Heveriko fa fantatry ny rehetra fa ny tendrombohitra avo indrindra eto an-tany dia Everest ... fa fantatrao ve izany ...
Azia atsimo atsinanana dia manana velaran-tany mendrika Paradisa ary ny sasany amin'izy ireo dia omen'ny Nosy Gili, akaikin'i Lombok, ...
Mikasa ny dia hahalala an'i Londres dia ho tsapantsika fa tsy tanàna mora vidy izany, izany no ...
Ny Katedraly Strasbourg dia iray amin'ny firavaka tsara indrindra amin'ny kanto Gothic any Eropa. Natomboka ny fananganana ...
Ny tanàna medieval tsara indrindra
Any Eropa dia misy tanàna medieval marobe izay voatahiry tsara ary manolotra toerana fizahan-tany mahafinaritra izay very.
Ny tanànan'i Salamanca dia toerana mety amin'ny fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro, tranokala iray lova manerantany ary feno tsangambato.
Jereo izay rehetra hitanao amin'ny faran'ny herinandro ao an-tanànan'i Zamora, miaraka amin'ny làlana Romanesque fanta-daza feno fiangonana.
Inona ny akanjo mahazatra any Peroa? Atorinay anao ny akanjon'ny Peroviana isan'andro, na lahy na vavy ary manao ahoana ny satrony peroviana
Fantatrao ve ny fizahantany fihazana? Sarotra ny hamintina io anarana io fa raha miresaka aminao aho ...
Wales: Fiteny sy fivavahana
Te hahafantatra ny fiasan'ny fiteny sy ny fivavahana any Wales ve ianao? Eto ianao manana ny pitsopitsony rehetra handaminana ny dianao mankany Wales.
Fampahalalana fototra momba an'i Eoropa Atsinanana
Te-hitsangatsangana ve ianao ary mila manana ny fampahalalana faran'izay betsaka momba an'i Eoropa Atsinanana? Ampidiro ny lahatsoratray izay isehoanay ny tsiambaratelony rehetra.
Jereo hoe iza ireo tanàna 6 manandanja indrindra eto Albania, toerana tsy azonao adino mandritra ny dianao mankany Albania.
Ho hitantsika ny fomba amam-panao ao Chiclayo sy ny tsiambaratelo nafenin'ny kolontsain'ity toerana amoron-dranomasina any Peru ity.
Mailuu Suu any Kyrgyzstan no iray amin'ireo tanàna maloto indrindra eran'izao tontolo izao, maninona no maloto be ny rivotra ka miaina ny olom-pireneny?
Jereo ny fomba amam-panao mahazatra any Maroc. Raha te hahafantatra ny zava-drehetra momba ny kolotsaina, ny fivavahany, ny gastronomie ary ireo faritra marokana hafa ianao, midira.
Jereo ireo firenena any Azia izay mahazo fitsidihana betsaka indrindra isan-taona noho ny kolontsainy, ny tontolo iainana na ny tantarany. Fantatrao daholo ve? Jereo izy ireo!
Jereo ny riandrano mahavariana indrindra any Amerika atsimo. Ny riandrano masiaka amin'ny tontolo miavaka dia miteraka riandrano mahatalanjona.
Inona ireo valan-javaboary Enina tsara indrindra any Amerika?
Jereo hoe iza ny sainam-pirenena enina tsara indrindra hita any Etazonia. Mpitaingin-tsoavaly manaitra izay misongadina noho ny hahavony sy ny hafainganam-pandehany.
Fantatrao daholo ve ny momba an'i Espana? Mitadiava fampahalalana vitsivitsy momba ity firenena eropeana ity toy ny mponina, ny toerana misy azy amin'ny sarintany, ny toetrandro na ny toerana fizahan-tany lehibe.
Nevados avy any Peroa
Jereo ny Nevados del Peru mahavariana indrindra 5 ary mankafy ny tontolon'ny fotsy atolotry ireo tendrombohitra Peroviana goavana ireo.
Alpine Fauna: Biby any Soisa
Fantaro ireo biby mahazatra an'ny Alpes any Suisse, biby iray isan-karazany izay fonenan'ny karazany maro. Te hahafantatra azy ireo ve ianao?
Amin'ity indray mitoraka ity dia hitsidika riandrano malaza sasany any Norvezy isika. Andao atomboka amin'ny fanonona ny De Syv Søstrene na Waterfall ...
Manana ny valin'ny peratra Paracas tamin'i Julio C. Tello izahay izay teo anelanelan'ny 1925 sy 1927 dia nahita momen 460 tany amin'ny nosyropolis Cero Colorado, Wary Kayan ary Cabeza Larga.
Araka ny valin'ny sary hosodoko sy ny zavamaneno vita amin'ny lava-bato, ny Colca Valley, any Arequipa, Peroa, dia nonina nandritra ny an'arivony taona maro
Ny morontsiraka Tuscany tsara indrindra any Italia
Mandehandeha any Italia izahay hahita ny morontsiraka tsara indrindra any Tuscany, toerana mitokana misy rano madio mangarahara sy torapasika nofinofy.
Fizahantany volkanika any Alaska
Androany dia hanao fizahan-tany amin'ny volkano any Alaska isika. Andao hanomboka ny fitsidihana ao amin'ny Volkano Cleveland, stratovolcano any andrefan'ny ...
Te handany fialan-tsasatra fahavaratra any Taiwan ve ianao? Ny fotoana tsara indrindra hankafizana ny morontsirak'i Taiwan dia ...
Androany dia hitsidika ny sasany amin'ireo lava-bato taloha indrindra eto Frantsa isika. Andao atomboka ny fitsangatsanganana ao amin'ny Lascaux Caves, a ...
Sary sokitra ivelany any Chicago
Androany isika dia hahita sary sokitra malaza indrindra ao an-tanànan'i Chicago. Andao atomboka ny ...
Hôtely voatondro any Bulgaria
Androany isika dia hihaona amin'ireo hotely mahavariana indrindra any Bulgaria. Andao atomboka amin'ny DoubleTree ny fitsidihantsika an'i ...
Ny mozikan'i Malta
Malta dia firenena voaforona nosy, ary eo afovoan'ny Ranomasina Mediterane, dia tena ...
Amin'ity indray mandeha ity izahay dia hampahafantatra anao ireo fampiharana miavaka indrindra handehanana any Roma. Andao hanomboka amin'ny firesahana an'i Katie Parla ...
Toe-javatra misy ankehitriny ny sehatry ny Hotely eto amin'izao tontolo izao
Ny fanarenana ny sehatry ny fampiantranoana dia nitombo niaraka tamin'ny fiakarana 4% tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2012, mitazona ny salan'isa antonony amin'ny taona 2005
Hazo Cherry any Japon
Raha handeha ho any Japon ianao dia tsy azonao atao ny mijanona tsy maka sary ny sakura malaza na voninkazo serizy Japoney izay mandravaka ny firafitry ny firenena Japoney.
Landscape an'i Dubai
Ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra dia mahita ny tanàna be vava any Dubai foana izahay, toerana iray azo raisina ho ...
Ny fialantsasatra fahavaratra any amin'ny morontsiraka tsara indrindra ao Lanzarote
Lanzarote, araka ny fantatrao, dia nosy Atlantika izay ao amin'ny nosy Canary, any Espana. Raha ohatra ka…
Nudism any Kolombia
Amin'ny raharahan'i Kolombia dia miatrika ny iray amin'ireo firenena vitsivitsy any Amerika atsimo izay manana ...
Ny morontsiraka tsara indrindra any amin'ny Nosy San Martin any Karaiba
Raha mpankafy fizahan-tany amin'ny masoandro sy amoron-dranomasina ianao, San Martin (Saint Martin) dia toerana misy torapasika virjiny, fasika ...
Ziggurat avy any Ur-Nammu: Piramida Sumerian any Iràka
Fantatrao ve fa tany Irak no nahitantsika ivon-toerana ara-pivavahana taloha? Eny, ny Ziggurat ao Ur-Nammu, ziggurat na ...
Fitsidihana ireo lapa Espaniola manan-danja (Fizarana 1)
Manaja tsara ny tany manome ny anarany isika dia mahita ny Castle of Loarre, izay manana ...
Faritra La Manga del Mar Menor
Inona no hitsidika an'i Virginia?
Andao hojerentsika ny sasany amin'ireo fizahan-tany fizahan-tany atolotry ny fanjakan'i Virginia antsika ankehitriny. Amin'izao fotoana izao dia trano i Virginia ...
Florianópolis: Ilay faritra amoron-dranomasina tsara indrindra any Brezila
Raha nanapa-kevitra ny handany fialan-tsasatra fahavaratra any Brezila ianao dia afaka manomboka ny lalanao any Florianopolis. Voucher…
Bahamas, Ocho Rios ary Cozumel: Ny perla any Karaiba
Androany izahay dia nanapa-kevitra ny hitsidika ny sasany amin'ireo nosy paradisaatika sy mpizahatany indrindra any Karaiba. Andao atomboka ny lalantsika ...
Nosy Comores: Fampahalalana ankapobeny, fomba amam-panao ary curiosities
Andao fonosintsika ny kitapontsika ary handamina fitsangatsanganana any amin'ny iray amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra eto an-tany. Izahay…
Ranomasina sy morontsiraka any Barcelona sy Ibiza
Raha iray amin'ireo te-hitsangantsangana amoron-dranomasina ianao, tsy misy tsara noho ny mitety ny morontsirak'i Mediterane. Andao atomboka amin'ny ...
Santa Marta: ny morontsiraka tsara indrindra any Kolombia
Ny iray amin'ireo toerana tian'ny tora-pasika izay tian'ny mpizahatany manapa-kevitra ny ho any Amerika atsimo dia ny mitsidika ny tanàna mahafinaritra ...
Te hiaina fitsangatsanganana voajanahary tanteraka any Espana ve ianao? Andao hofantarina ny sasany amin'ireo morontsiraka nudist manaitra indrindra eto amin'ny firenena. Andao hanomboka ...
Bodisma any Azia
Fantatsika tsara fa ireo fivavahana lehibe dia teraka teo amin'ny kaontinanta mavo. Jodyisma, Kristianisma ary Silamo no porofo ...
Lake Geneva: Fizahan-tany ambanivohitra sy voajanahary any Suisse
Toerana tsara tarehy izay tsy tokony halainao mandritra ny dianao fitsangatsanganana any Suisse, tsy isalasalana fa ...
Fetibe Salsa eto amin'izao tontolo izao
Salsa dia karazana mozika be mpandihy any Amerika Latina, fa indrindra any Karaiba. Ity gadona mikitroka nandresy ...
Platja d'es Pregons sy Wreck Beach: 2 amin'ireo morontsiraka miboridana tsara indrindra eran'izao tontolo izao
Manohy mitety an'izao tontolo izao izahay hahita an'i Frantsa, fantatra amin'ny anarana hoe tora-pasika miboridana voalohany eto ambonin'ny planeta. Anjarantsika izao ...
Ny fitsangatsanganana any amin'ny firenena hafa dia tsy midika hoe fahafantarana ireo tsangambaton'ny marika indrindra fa koa ny fahalalana momba ny kolontsaina malaza. Fizarana…
Ny Mediteraneana dia manana toerana fizahan-tany marobe izay tsy maintsy fantatry ny saintsika sy ankafiziny, ary i Italia dia iray ...